जेक पॉल धम्की को बिरुद्ध आधार शुरू गरे पछि हाई स्कूल मा एक धम्की भएको स्वीकार गर्दछ - पप संस्कृति
जेक पॉल धम्की को बिरुद्ध आधार शुरू गरे पछि हाई स्कूल मा एक धम्की भएको स्वीकार गर्दछ
जेक पॉलले भर्खरै एक साक्षात्कार मा आफ्नो हाई स्कूल को दिन को समयमा धम्की को दिने र प्राप्त गर्ने दुबै मा रहेको स्वीकार गरे। यो कथन YouTuber को नयाँ फाउन्डेसन को सम्बन्ध मा बनाइएको थियो जुन बदमाशी को बिरुद्ध वकालत गर्दछ।
२५ वर्षीय YouTuber र पूर्व डिज्नी च्यानल स्टार, जेक पॉल २०१३ मा आफ्नो भाइ लोगान पॉल संगै आफ्नो अनलाइन क्यारियर शुरू गरे। एक पटक एक निर्दोष अभिनेता शो मा देखा पर्दै बिजार्डवार्क , जेक को यूट्यूब क्यारियर उनको नियन्त्रण बाहिर सर्पिल को कारण थियो। दुर्व्यवहार आरोप बाट महामारी को बीच पार्टीहरु फ्याँक्न सम्म, जेक पॉल आफैलाई एक सार्वजनिक दुश्मन मा परिणत भएको छ।
जे होस्, धेरैले उसलाई बक्सि started सुरु गरे पछि फरक देख्न थाले। उसको भाइ लोगान जस्तै, जेक खेल मा ध्यान केन्द्रित गरेर केहि हद सम्म आफूलाई छुटकारा थियो।
जेक पॉल आफ्नो नयाँ आधार मा आफ्नो विचार साझा
जुलाई २१ मा एमएमए सेनानी टायरन वुडली बिरुद्धको लडाई भन्दा एक महिना भन्दा पहिले, जेक पॉलले आफ्नो नयाँ फाउन्डेसन 'बक्सि B बुलीज' को शुरुवात गर्ने घोषणा गरे, जुन साइबर धम्की विरुद्ध लड्छ।
एक एकल बुबा डेटि expect के आशा गर्ने
बिहीबार दिउँसो, जेक आफ्नो आगामी फाउन्डेशन प्रक्षेपण को बारे मा साक्षात्कार गरिएको थियो, जहाँ उनले विस्तृत योजना के बच्चाहरु को लागी थिए जो संलग्न थिए।
'यो केहि भएको छ जुन हामी एक बर्ष को लागी काम गरीरहेका छौं। अन्तमा हामी यसलाई शुरू गर्न जाँदैछौं। '
उनले भने कि फाउन्डेशन १०० बच्चाहरुलाई बक्सि experience्ग अनुभव दिन मा ध्यान दिन जाँदैछ कि उनीहरुलाई 'धम्कीको बिरुद्ध' को रक्षा गर्न सिकाउन सक्षम हुन।
'हामी १०० बच्चाहरुलाई बिभिन्न मुक्केबाजी अभ्यास र किक फाईट गर्न को लागी जाँदैछौं ताकि उनीहरुसंग अनुभव छ। हामी उनीहरुलाई कोच र आधिकारिक ग्लोभ्स दिनेछौं र उनीहरुलाई पढाउनेछौं किनकि हामी सबैले आफूलाई बदमाशीको बिरुद्ध बचाउनु पर्छ।
जेक पॉलले साक्षात्कारकर्तालाई भने कि उनी बुढेसकालमा धम्कीको 'दुबै पक्षमा' थिए।
पहिले आफूलाई एक 'समस्या बच्चा' को रूप मा वर्णन गर्दै, जेक बोले कि कसरी उनी एक पटक दुर्व्यवहार को दुबै छेउमा भएको बारे मा महसुस गरे, विशेष गरी उनको प्रारम्भिक यूट्यूब दिनहरुमा।
'यसले मलाई साँच्चै प्रभावित पारेको हो र जब मैले महसुस गरें कि मानिसहरु हरेक दिन भन्छन् ... कहिलेकाहिँ उनीहरु को बारे मा सोच्दैनन् ... जब तपाइँ एक अपमान वा एक ट्वीट पठाउनुहुन्छ तर त्यहाँ कोहि छ जो यसलाई प्राप्त गर्दछ। । यसले तपाइँको बाँकी जीवनलाई असर गर्न सक्छ। '
जेक पॉल बक्सिंग बुलीज फाउन्डेसन जुलाई २५ मा सुरु हुने गरी सेट गरिएको छ। यसै बीच, टायरन वुडले बिरुद्ध उनको अत्यधिक प्रत्याशित लडाई अगस्त २ th मा शुरू हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्: जेफ्री स्टार एक निजी Wyoming खेत को नयाँ स्वामित्व को घोषणा को रूप मा प्रशंसकहरु उहाँलाई शुभकामना
तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यदि एक केटी रुचि छ?
के मैले मेरो सम्बन्ध प्रश्नोत्तरी समाप्त गर्नु पर्छ?
जीवन एक किताब कविता जस्तै छ
कसरी एक दुखी विवाह बाँच्न
के गर्ने जब दुई केटाहरु तपाइँलाई मनपर्छ
ढु cold्गा चिसो स्टीव अस्टिन stunner